Gbanwuo TV na ekwentị site na Chromecast | Gam akporosis
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọ bụla taa nwere smart TV, nke a makwaara dị ka Smart TV. Ojiji nke ha zuru oke, ebe ọ ga-ekwe omume ijikọ na Internetntanetị, chọgharịa, lee YouTube na ngwa, lelee usoro na ihe nkiri na ngwa dị iche iche dị.
Ihe ọzọ dị mkpa bụ Google Chromecast, ngwaọrụ nke ị nwere ike iji lee ọdịnaya ezitere site na ekwentị, mbadamba ma ọ bụ na kọmputa gị. Taa, anyị ga - akụziri gị otu esi agbanye TV na ama nke Chromecast batara n'oge niile mgbe ọ na - emekọrịta n'etiti ọnụ ọnụ ekwentị na televishọn.
Taa anyị ga-akụziri gị gbanye TV ozugbo na ChromecastMaka nke a, ị ga-agbaso usoro ole na ole iji gbanye ihuenyo na-enweghị njikwa.
1 Jikọọ chaja na Chromecast
2 Mee HDMI CEC n'ọrụ na TV gị
3 Jiri Google ka ịgbanwuo TV
Jikọọ chaja na Chromecast
Google Chromecast Ọ ga-achọ ike iji rụọ ọrụ, yabụ na-atụ aro ịkwụnye chaja na nke a ka ọ rụọ ọrụ. Chromecast agaghị eji ike mgbe ihuenyo TV dị, yabụ ọ dị mkpa na ngwaọrụ Google nwere ụzọ ọzọ. Cheta na ị gharịrị ịhazi Chromecast na ngwa Homelọ.
Ọ bụrụ na ị nwere chaja gị ekwentị gị nwere ike iji kwuru USB nke mere na Chromecast Ọ dị na oge niile yana ya, anyị nwere ike ịmekọrịta ekwentị anyị. Onye nrụpụta a na-ekwukarị na enwere ike iji Chromecast ọtụtụ, ma ọ bụ iji ekwentị ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ.
Mee HDMI CEC n'ọrụ na TV gị
Ndị na-emepụta TV dị iche iche na-akpọkarị ya dị iche iche, ọ bụ ezie na ụkpụrụ ahụ bụ otu na A ga-eji ya meekọrịta ihe n’etiti TV na Google Chromecast. Site na ndabara, a na-arụ ọrụ a na ọtụtụ telivishọn, ọ bụ ezie na ịlele ya, ị ga-aga Ntọala> HDMI CEC ma ọ bụ ihe nrụpụta.
Ozugbo emere nhọrọ ahụ ma tinyekwa Chromecast ahazi, ọ ga-ekwe omume ịgbanye TV site na ekwentị ngwa ngwa na ngwa ngwa. HDMI CEC na-arụ ọrụ nke ọma, ma mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ọ daa ada ọ dị mkpa ka ịkwụpụ TV site na isi nke obere nkeji ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
Jiri Google ka ịgbanwuo TV
Ọ bụrụ na ị na-ahazi na mbụ Google Chromecast na Home ngwa dị na-ekwu "Tụgharịa na TV" maka wizard ka ịgbanwuo ya site na iji ngwa Google. Ozugbo agbanwuru gị, ị nwere ike iji gam akporo ngwaọrụ gị na Chromecast na-emekọrịta ihe ma nwee ike ịnwe ụdị ọdịnaya ọ bụla izipụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Tụgharịa TV na ekwentị site na Chromecast